Joe Biden oo la wareegay hoggaanka tirinta codadka gobolka Pennsylvania | Warkii.com
Home warkii Joe Biden oo la wareegay hoggaanka tirinta codadka gobolka Pennsylvania
Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa qabtay hoggaanka tirada codadka gobolka muhiimka ee Pennsylvania, waxaana iska cad inuu noqon doono madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka.
Gobolkan ayaa leh 20 cod oo ka mid ah kuwa loo yaqaan Electroral Collage ee lagu hanto xilka madaxweynaha, wuxuuna ku filan yahay inuu Biden ka dhigo madaxweyne.
Biden ayaa hadda leh 253 cod, wuxuuna gobolka gaarsiin doonaa 273. Musharaxa madaxweynaha noqonaya ayaa u baahan 270. Tani macnaheedu wuxuu yahay in Biden uusan u baahneyn gobollada kale ee aan weli go’aanka laga gaarin.
Gobolka Pennsylvania ayaa waxaa weli ku harsan codad u badan kuwa Dimoqraadiga, waxaana la filayaa in Biden uu badankood ku guuleysto, taasi oo ka dhigeysa inaysan jirin rajo uu Trump ugu guuleysan karo gobolkan.
Qabashada hoggaanka Pennsylvania ayaa macnaheedu yahay in Rajada Donald Trump ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ay dhammaatay, waxaana kasoo xirmaya albaab kasta oo fursad ah, ayada oo ay u badan tahay in maanta doorashada lagu kala baxo.
Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, oo Trump la loolamaya, ayaa goor sii horreysay si lama filaan ah u qabtay hoggaanka codadka gobolka Georgia, taasi oo aan marnaba la fileyn ka hor doorashada.
Gobolada aan weli la go’aamin ayaa kala ah; North Carolina oo uu hoggaaminayo Trump, iyo Pennsylvania, Arizona iyo Nevada oo uu ku horreeyo Joe Biden.
Gobolka Pennsylvania waa gobolka uu ku dhashay Joe Biden, gaar ahaan magaalada Scranton.
Previous articleKu dhawaad 60 qof oo lagu dilay gudaha Somaliland
Next articleR/W ABIY AHMED oo war isbeddel ah kasoo saaray dagaalka gobolka Tigray-ga
Waxaa isa soo taraya cabashada ka soo yeereysay sida loo wajahay soo xulista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka HirShabelle oo dhowaan lagu dhowaaqay inkatoo weli...